Ogaden News Agency (ONA) – Muxaaradarooyin diini ah oo Jaaliyadda JOKA ay ku qabteen masjidka Al-Qudamaa
Muxaaradarooyin diini ah oo Jaaliyadda JOKA ay ku qabteen masjidka Al-Qudamaa
Posted by ONA Admin	/ August 17, 2012
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Koonfur Africa xafiiskeeda arimaha diinta ayaa soo abaabulay muxaadaro lagu qabtay magaalada Uitenhage masaajidka Al-qudamaa. Muxaadaradan ayaa waxaa lagaga hadlay sadex mawduuc oo kala ah jihaadka iyo qaybihiisa iyo xasuusinta aakhiro oo uu ka hadlay Sheekh Maxamed Nadiir Cismaan illaahay cimrigiisa ha dheereeyee. Waxuu sheekhu si fiican dadka ugu baraarujiyay inay jihaadka kaga qayb qaataan sadex arimood oo uu ku saleeyay diinta sida inuu qofka gacanta ku dagaalamo ama carabka ku dagaalamo ama uu qofka qalbiga ku dagaalamo taasoo ah midda ugu hoseysa oo qofkii laga waaya uu imaankiisa dhamaystirenyn. Wuxuu sheegay Sheekha inuu Rasuulka CS sidaa ina amaray, wuxuuna Sheekha hadal walba aayad ama axaadiith ku sardinayay .
Ka dib markuu dhamaystay mawduuca jihaadka iyo qaybuhuu u kala baxo ayuu raaciyay Sheekhu xasuusinta aakhiro isagoo yidhi; maalin kasta wuxuu qabrigu inoo sheegaa shan kalimo; yaa ibnu aadam maanta waad igu dulsocotaa barina anigaad calooshayda soo galaysaa, yaa ibnu adam maanta waad igu dulseexataa, barina anigaad i dhexseexanaysaa, yaa ibnu aadam maanta korkayga ayaad xumaanta ku samaynaysaa, barina dhexdayda ayaa lagugu cadaabi doonaa.
Waxaa isna muxaadara ka jeediyay sheekh Maxamed Yusuf oo ka hadlay soonka iyo axkaamta la xidhiidha, Sida fadliga bisha barakaysan ee ramadaanka, ciqaabta ka dhalan karta qofka aan tawbad la imaanin xiliga soonka iyo xilikastaba. Waxaa kaloo uu ka hadlay Sakaatul fidriga cida ay ku baxayso iyo cida aysan ku baxaynin. Labada sheekh ayaa muxaadarooyin dheer ka soo jeediyay oo aad u faahfaahsanaa.
Qaybtii 1aad ee Sheekh Nadir halkan ka dhagayso;